Gịnị bụ asụsụ ndị mmụọ ozi Celestial ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Gịnị bụ asụsụ nke ndị mmụọ ozi nke eluigwe. A kpọtụrụ asụsụ ndị mmụọ ozi naanị otu ugboro na Baịbụl. N'agbanyeghị nke ahụ, akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-akọwa na ịhụnanya dị mkpa karịa ịsụ ọtụtụ asụsụ ndị a ma ama na ndị a na-amaghị. Asụsụ ndị mmụọ ozi na-anọchi anya asụsụ ndị a na-amaghị ama.
"Ọ bụrụ na m na-asụ asụsụ ụmụ mmadụ na ndị mmụọ ozi, ma enweghị m ịhụnanya, m ga-adị ka ígwè na-ada ụda, ma ọ bụ ájà nke na-egbuke egbuke.«. 1 Ndị Kọrịnt 13:1
1 Ndị mmụọ ozi hà nwere asụsụ nke ha?
2 Gịnị ka Pọl bu n’obi kwuo “ire nke ndị mmụọ ozi”?
3 Ònye nwere onyinye nke ịsụ asụsụ ndị mmụọ ozi?
Ndị mmụọ ozi hà nwere asụsụ nke ha?
Anyị enweghị ike ikwu Gịnị bụ asụsụ nke ndị mmụọ ozi nke eluigwe, ebe ọ bụ na n’ime Akwụkwọ Nsọ ọ bụ nanị okwu ndị mmụọ ozi ka e gosiri na-ezisa ozi asụsụ ndị mmadụ ghọtara. Enweghị ntụaka maka asụsụ ole ndị mmụọ ozi na-asụ, ma ọ bụ na ha nwere otu asụsụ ma ọ bụ karịa nke ha. Ihe Baịbụl na-elekwasị anya bụ mmekọrịta dị n’etiti mmadụ na Chineke, ọ bụghị ndị mmụọ ozi.
Na Baịbụl, ndị mmụọ ozi na-agwa ha okwu ziga ozi sitere na Chineke nye ụfọdụ ndị, iji asụsụ ndị ha maara nke ọma, ma ọ bụ ito Chineke.
«Toonụ ya, unu ndị mmụọ ozi ya niile;
Toonụ ya, unu ndị agha ya niile.—Abụ Ọma 148:2
Anyị amaghị ma ndị mmụọ ozi nwere asụsụ pụrụ iche iji too Chineke.
Gịnị ka Pọl bu n’obi kwuo “ire nke ndị mmụọ ozi”?
Pọl na-akọwa nke ahụ Ihe kacha mkpa bụ amaghị ọtụtụ asụsụ, ihe kacha mkpa bụ inwe ịhụnanya. Ndị chọọchị Kọrịnt ji ọgụgụ isi na ngosipụta nke ime mmụọ kpọrọ ihe nke ukwuu. Ihe a niile dị mma, ma ha nwere uru naanị mgbe anyị hụrụ ibe anyị n'anya. Ndị Kraịst nọ na Kọrịnt egosighị ịhụnanya.
«Ma ọ buru na enwerem amuma, ghọta kwa ihe-omimi nile na sayensi nile, ọ buru kwa na enwerem okwukwe nile, n'uzọ m'we kwaga ugwu, ma enweghim ihu-n'anya, abughm ihe ọ bula.
Ma ọ bụrụ na m ekesara ihe niile m nwere inye ndị ogbenye nri, ọ bụrụkwa na m nyefere ahụ m ka e kpọọ ya ọkụ, ma enweghị m ịhụnanya, ọ baghị m uru. 1 Ndị Kọrịnt 13: 2-3
N'akụkụ a, ịsụ "asụsụ ndị mmadụ" na-anọchi anya ọgụgụ isi, omenala. Ikwu “asụsụ ndị mmụọ ozi” na-egosipụta ọnọdụ ime mmụọ, njikọ ya na ihe karịrị mmadụ.
Ònye nwere onyinye nke ịsụ asụsụ ndị mmụọ ozi?
O nweghị ihe e zoro aka na Baịbụl n’onyinye ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche n’asụsụ ndị mmụọ ozi. Ya mere, anyị amaghị ma ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ dị iche iche na-asụ asụsụ ndị mmụọ ozi .
Ụfọdụ ndị nwere onyinye a na-asụ asụsụ ndị ọzọ na-aghọta, nke mere ka o doo anya na ha anaghị asụ asụsụ ndị mmụọ ozi. Ọzọkwa, ndị ọzọ na-asụ asụsụ ndị na-enweghị onye maara, Bible ekwughịkwa asụsụ ha bụ. Ọ na-ekwu naanị na ha bụ ihe omimi, na naanị Chineke na-aghọta, ọ naghị ekwu na ndị mmụọ ozi na-aghọtakwa.
"N'ihi na onye na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche adịghị na-agwa ndị mmadụ okwu, ma Chineke; n'ihi na ọ dịghị onye na-aghọta ya, ọ bụ ezie na ọ na-ekwu site na Mmụọ Nsọ ihe omimi.. 1 Ndị Kọrịnt 14:2
Ma ugbu a anyị maara ihe ọ pụtara Gịnị bụ asụsụ nke ndị mmụọ ozi nke eluigwe, anyị nwere ike ịghọtakwu ozi Chineke nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmara Gịnị bụ ebo iri na abụọ nke Izrel, na-aga na webụsaịtị anyị chọpụtara.online ka ọ ghara tufuo nkọwa.
Gịnị bụ usoro oge nke akwụkwọ ndị dị na Baịbụl